Unicode and … Unicode | м м ť ђ ĩ ŋ ķ є я ကိုသင္ကာ
Unicode and … Unicode	Posted by mm thinker on December 29, 2008
Posted in: Unicode.	Tagged: Unicode.	(၁)
(၂) မြန်မာ ဝါ့ဒ်ပရက်စ် ဘလော့ဂင်းမှာ နည်းပညာ ဝေမျှသူ မှော်ဆရာကလည်း သူ့ရဲ့ ဘလော့ဂ်ကို ယူနီကုဒ်နဲ့ ပြောင်းရေးတော့မှာ ဖြစ်တယ်လို့ ရေးထားတာတွေ့ပါတယ်။ ကျနော်လည်း အားရှိသွားပါတယ်။ တချို့ကလည်း ကျနော် ယူနီကုဒ်နဲ့ ပြောင်းရေးတာကို သဘောမကျတဲ့ပုံ ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော်က အနာဂတ်အတွက်ရော ပိုကောင်းမယ့် လမ်းစဉ်ကို ရွေးတာဖြစ်ပြီး ကျနော့်မှာ ရွေးပိုင်ခွင့်လည်း ရှိပါတယ်။ ဒီလိုပြောင်းရေးတာ ကျနော့်ရဲ့ ဘလော့ဂင်း သက်တမ်းမှာ အသိနိုးကြွမှုလို့ပဲ မြင်ပါတယ်။ လေ့လာသိမြင်တဲ့အခါမှာ ကိုယ်ဘာလုပ်သင့်တယ်တာ ရွေးချယ်ရစမြဲပါပဲ။ သေချာတာကတော့ ကျနော်တို့ ပြောင်းရေးတာမှာ ဘယ်စည်းပွားရေး အဖွဲ့အစည်းရဲ့ အကျိုးစီးပွား ကြိုးကိုင်မှုတွေနဲ့မှ ပတ်သက်မနေဖို့ပါပဲ။
(၄) ယူနီကုဒ်ဖောင့်ထည့်ဖို့နဲ့ ပတ်သက်လို့ မှော်ဆရာက ဒီလို အကျဉ်းရေးထားပါတယ်။
← Hot, Flat and Crowded – 2	In…dar view !!! →	0 comments on “Unicode and … Unicode”
MhawSayar on December 29, 2008 at 4:17 pm said:
အားလုံး အတွက် ကိုသင့်ကို ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း နှင့် အခုလို အားပေး၊ ကိုသင့် ဘလော့ဂ်မှာ ထပ်ဆင့် ညွှန်ပြပေးတဲ့ အတွက်လည်း ကျေးဇူး အထူးတင်ပါကြောင်း ပြောပါရစေဗျို့။🙂
ဟန္သစ္ၿငိမ္ on December 29, 2008 at 5:22 pm said:
sandar on December 30, 2008 at 1:03 am said:
ဒါေပမယ့္ ေမွာ္ဆရာ မန္႕တာေတြ ဖတ္မရျပန္ဘူးးးး😦
Thinker on December 30, 2008 at 5:16 am said:
>Dear Ko Mhaw Saya – I suppose that blogging is the process of mutual learning.🙂
> Han Thit Nyeim – You tag me about imagination…fantasy…romantic… There arealot of my indulge fantasies. I will pick up one to illustrate.😛
But that may make you to barred form reading in Zawgyi-one. Anyway we still need two font set for blog reading.😦